Monday, July 16 , 2018 | सोमबार, आषाढ ३२, २०७५ |
डा सुरेन्द्र भण्डारी -
हामीले सवैले मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो चिकित्सा शिक्षा सुधारकालागि बनाइएको बिधेयक डा केसीको निरन्तरको आन्दोलन र समर्पणका कारण संसदमा पुगेको छ। सुधारका लागि कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरा माथेमा समितीको प्रतिवेदनमा लिपीबद्द छन्। त्यसैले सासंदज्युहरुले डा केसीको आन्दोलन र माथेमा प्रतिवेदको मर्मको सम्मान रहने गरि यो विधेयक संशोधन गरि पास गराउन पहल गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु।
डा. जीवन क्षेत्री -
मनमोहन मेडिकल कलेज किनबेच सफल भएर वा नभए पनि नीतिगत रुपमा एमाले माथेमा प्रतिवेदनका दुवै बुँदामा अडियो भने के हुन्छ? त्यो अवस्थामा माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नै ऐन जारी हुन्छ र बी एण्ड सीले त्रिवि वा केयुबाट सम्बन्धन पाउँदैन।
डा. लोक भट्टराई -
भरतपुरको कुरामा शान्तिपूर्ण र सभ्य समाधान हुँदै नभएको पनि होइन। कानुनको बिध्यमान दफा ध्वंसलाई प्रेरित गर्ने खालको रहेछ भन्ने सबैलाई लागे, त्यो तुरुन्तै परिबर्तन गर्न सकिन्छ। बुझ्न नसकिने के भएको छ भने, त्यता तिरको कुरा नगरेर किन ज्यादा मान्छे आक्रोश बढाउनै तिर लागेका छन्, प्रश्न यो हो कि आखिर ति के चाहन्छन ?
मनमोहन अस्पताल राज्यलाई बेचिदिउँ
‘मलाई ठूलो मान्छे होइन असल मान्छे थियो भनेर सम्झिदिए पुग्छ’ भन्ने जीवन आदर्श बोकेका सादगी र नैतिकताका उच्च धरोहर स्व. मनमोहन अधिकारीका नामलाई कसैले विवादित बनाउन नपाउन् र धमिलो पानीमा माछा मार्ने कसैको गलत उद्देश्य पूरा हुन नपाओस् भन्नाका लागि एउटा कठिन निर्णय गर्नुहोस् र तपाईंहरु प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका भौतिक संरचनाहरु राज्यलाई बिक्री गर्न सहमत हुनुहोस्! विस्तृतमा
नेपाली भाषीको पहिचान निर्माणको आधार
आई पी अधिकारी -
भारतमा चालेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले ११० वर्ष पार गर्दा पनि त्यहाँको सानो समुदायले आफ्नो पहिचान निर्माण गर्न सकेको छैन। गोर्खाल्याण्ड स्थापना गर्ने सके सायद यसले कालान्तरमा ‘नेपालका नेपाली’ र ‘नेपाल बाहिरका नेपाली’ बीचको समानता र फरक निर्क्योल गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
समाजमा डा केसीजस्ता नागरिक अभियन्ता नभएको भए के हुन्थ्यो?
आउनोस्, एक युगमा एक पल्ट आउने त्यो दिन, यही साउन २८ गते शनिवार, माइतीघरमा जम्मा भएर राज्यलाई नागरिकका कुरा सुनाएर जवाफदेही बनाऊँ र भनौं: हाम्रो संसद सार्वभौम त हो तर माननीयज्यूहरुको त्यो सार्वभौमसत्ता पहिलेका राजा महाराजाहरुको झैं वंशानुगत रुपमा आएको हैन, जनताको मत पाएर त्यसबाट निःश्रित भएको हो। आज जनताको हितमा नभएर आफ्नो स्वार्थमा कानुन बनाइयो भने भोलि नागरिकहरुले सहर्ष उनीहरुसित त्यो सार्वभौमसत्ता खोस्नेछन्।
पत्तै नपाई एनआरएन हाईज्याक
रु हुन्छ भने तपाइले गरे जस्तै ब्यबसायको उपाय र सफल हुने रहस्य के छ, त्यो अलि अलि भने पनि सिकाउनुस अरु एनआरएनए साथीहरुलाई देशदेशमा गएर। र अझै इच्छा भए सल्लाहकारको रोलमा बस्नुस एनआरएनएमा। कामदार बहुल देशको एनआरएनए हो, त्यसमा कामदार बर्गलाई नै प्रतिनिधित्व गर्न दिनुस्। कामदार हुन्, पढेलेखेका छैनन् भन्ने भ्रम छ भने, त्यो भ्रम कृपया त्याग्नुस। देशको स्थिति बिग्रेर पो नत्र साउदी, कतार, कोरियामा काम गर्ने प्राय सबै यी भाईबहिनि शिक्षित नै छन्; ब्याचलर, मास्टर्स गर्ने समेत कति छन् कति। त्यसैले सक्छन्, आफ्नो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन, आफ्नो आवश्यकताका बारे बोल्न सक्छन, जत्ति पनि सक्छन्।
नारायणी देवकोटा -
आफ्नो भाग्य र भविष्यको तालाचाबी अब स्थानीय जनाप्रतिनिधीको हातमा पुग्दै छ। यसरी तालाचाबी हातमा लिएपछि केन्द्रबाट शोषण भएको छ, फलानो क्षेत्रलाई काठमाडौंले निरन्तर शोषण गरेर अगाडि बढ्न दिएन, सहयोगको नाममा पर निर्भरता लाद्यो वा कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्न कति दिन हिँड्नु पर्छ भनेर हर्क गुरुङले लेखेका साहित्य घोकेर गरिने राजनीतिक भाषा कुराले नेतृत्व स्थापित हुने छैन। ठूला ठूला गफ दिएर अब नेतृत्व स्थापित हुन्न भन्ने कुरा काठमाडौं महानगरपालिकामा ‘सिस्टम’को विषयलाई जोड दिएकी रञ्जु दर्शनाले पाएको मतले देखाउँछ।
गजेन्द्र बुढाथोकी -
अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको पनि साङ्ग व्यक्तिसरह बराबरी मानव अधिकार हुन्छ। अझ उनीहरूको दैनिक जीवन निर्वाह साङ्ग व्यक्तिभन्दा कठिन हुने भएकाले यस्ता नागरिकका लागि राज्यले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर बिडम्बना नै भनौं, हाम्रो परम्परागत सोच (अपाङ्गगतालाई पूर्वजन्मको पाप भन्ने गलत सोच), सरकार, जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरूमा यो मेरो मुद्दा होइन, मैले किन सोच्ने भन्ने गलत प्रवृत्तिका कारण पूर्वाधारदेखि सेवाप्रवाहसम्मको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले हरेक पाइला–पाइलामा कठिनाइ झेल्नु परिरहेको छ।
भरतपुरको चुनावमा एमाले र माअोवादी केन्द्र मात्र दुई पक्ष हैनन्। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि भरतपुर महामगरमा माअोवादी पार्टीसँग चुनावी गठबन्धनमा छ। चितवन जिल्ला कांग्रेसले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी त्यो वडामा पुन: निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेको छ। हामीलाई आशा छ, कांग्रेसले भरतपुरमा मेयरको सिट मात्र माअोवादीलाई छाडेको हो, अाफ्नो इमान र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा पनि उसैको पोल्टोमा छाडेको हैन।
उज्ज्वल प्रसाईं -
मतपत्र नै त्यति ठूलो हुने भएपछि गणना गर्न समय धेरै लाग्न सक्छ भनेर अनुमान गरेको भए एकै पटक धेरै ठाउँमा मत गन्ने व्यवस्था पहिल्यै गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो पट्यारलाग्दो गरी बनेको लम्बेतान मतगणनाले सयौं मान्छेलाई बेकार अलमल्याएर राखको छ। सार्वजनिक वहस स्थानीय तहका अन्य पेचिला विषयमा प्रवेश गरिसक्नुपर्ने बेलामा भरतपुरका देवी र रेणुको अन्तर नाप्नमा वहस सिमित हुनपुगेको छ।
डा. रेणु अधिकारी -
उनीहरु चुनाव हार्दा धेरैलाई खुसी पनि लाग्छ होला, तर म रन्जु र रेणुलाई भन्न चहान्छु तिमीहरू हारे पनि जित तिमीहरू कै हुनेछ। लामो समय देखि प्राप्त सत्ताको शक्ति, विभिन्न प्रकारले प्राप्त असीमित श्रोत, एकतर्फी प्रचारजस्ता कारणबाट प्राप्त शक्तिको सहयोगबाट जितेको भोटभन्दा तिमीहरुले प्राप्त गरेको भोट बढी प्रभावकारी हुनेछ।
शिव प्रकाश -
हामी मानिसलाई उमेरले गुणा गरेर अनुभवको हिसाब निकाल्छौं । मानिसमा भएको आत्मविश्वास, साहस र उर्जाभन्दा ठूलो अनुभव के हुन्छ ? अनुभवले उर्जा जन्माउँछ भन्न सकिदैन तर उर्जाले अनुभव अवश्य जन्माउँछ । कर्मको स्रोत नै उर्जा हो । तिमीभित्र भएको त्यो उर्जा नै तिम्रो जित हो, रञ्जू ।
इतिहास पल्टायो भने गिरीजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम भटराई र माधव नेपालको नाम आउँछ । यसकारण आफूले गर्दा सबै ठीक अरुले गर्दा बेठिक हुँदैन। विषयको गहिराइमा नगइकन गरिएको टिप्पणीले अरुको जीवनमा कति आघात पुर्याउँछ भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्दछ। सञ्चारमाध्यममा आएको टिप्पणीको आधारमा जिम्मेवार निकायहरुको धारणाले भोलि अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित हुने परिवारले कति असर गर्ला विचार गरौं।
कांग्रेस र कांग्रेसी एउटै होइन
गगन थापा -
हेक्का राखौं, संक्रमणकालमा नै मन्त्रिपरिषद, न्यायालय, संसद जस्ता राज्यका अंगहरू र जिम्मेवार संस्थाहरू यसरी भड्किन थाले भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्र गणतन्त्रको भार थेग्न सम्भव छैन। अझै राम्ररी स्थिर हुन नसकेका हाम्रा संस्थाहरुलाई अतिवादी बाटोबाट तुरुन्त फर्काउन जरुरी छ। तर त्यसरी फर्काउँदै गर्दा कुनै संस्था पनि हार्नु हुन्न र त्यसक्रममा फेरि कुनै गलत नजीर पनि स्थापित नहोस् !
शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तलाई चुनौती
कुनै पनि संवैधानिक निकाय र न्यायालयका मन नपर्ने पदाधिकारी र न्यायाधीशविरुद्ध एकचौथाइ सांसद भएको दलले डर देखाइराख्न पाउने भयो। आफूले भनेको फैसला वा निर्णय नलेखे रातारात निलम्बन गर्न सक्ने भयो। राणकालीन पजनीभन्दा पनि यो व्यवस्था खराब हुने भयो।
केवल हल्काफुल्का भावनात्मक टिप्पणीमा उभिएर संविधानप्रदत्त संसदको विशेषाधिकार खोस्ने आधारको औचित्य पुष्टि हुन्न। कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाभन्दा बढी संविधानको पालना गर्ने नैतिक दायित्व न्यायपालिकामा हुन्छ। तर, आज सर्वोच्च अदालतले भावावेशमा त्यो दायित्व भुलेर महाअभियोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ। शक्ति सन्तुलनको न्यूनतम आदर्श उल्लंघन गरेको छ।
महिला सापेक्ष 'बौद्धिकता'को बहस
सरिता तिवारी -
बुद्धिजीवि भनेको लोग्नेमान्छे मात्रै हुन्छ भन्ने सोचलाई विनिर्माण गर्न सक्ने महिलाहरू असंख्य भइसके। देख्नुपर्‍यो नि। त्यो देख्न आँखाको दृष्टी मात्रै होइन दिमागी दृष्टी नै फेर्नुपर्छ। इतिहास र समाजको मसिनो बोध गर्न, त्यो बोधलाई प्रशोधन गरेर ज्ञानको रुप दिन र त्यसलाई व्याख्यासमेत गर्न सक्ने महिला बौद्धिक नेपाली समाजमा छन्। समाजको लैङिगक संरचनामा जब्बर भएर बसेको दुराग्रहका कारण तिनले टुसाउने, हुर्कने र प्रसार हुने मात्र होइन स्वीकृत हुने सम्मको चरणमा पाइलैपिच्छे सिँगौरी खेल्नुपरेको छ।
उत्तरबाट काँग्रेसको, पूर्वबाट एमालेको रेल !
रोहित खतिवडा -
स्थानीय निर्वाचनको मुखमा दलका विकासका नारा गोनु झाका बाचा जस्तै हुन्, पूरा नहुने, पूरा गर्नुनपर्ने। दलहरूका नारा महत्वकांक्षी सपनाले भरिएका मात्र छैनन, तिनको स्थानीय निकायको चुनावसँग कुनै सरोकार छैन। त्यसैले यी नारा गलत समय र गलत ठाँउमा परेका छन्।
दाहाल–देउवाको लोकतन्त्र मास्ने चाल
चरण प्रसाई -
नवराज सिलवाल प्रकरण देउवा–दाहाल जोडीको लागि एक वहानाबाजी मात्र हो। तिनका प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचारलगायत सबैखाले अपराधबाट राजनीतिक उन्मुक्ति हो। अन्ततः स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली स्थापित गर्नु हो। तर यसमा लागेका दुबै पार्टी र तिनका नेता अवश्य असफल हुनेछन्।
सरकारको बेवास्ताले मणिपाल घटना
रामकृष्ण ज्ञवाली -
के मणिपाल अस्पताल बन्द भएको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर थियो, थिएन। त्यहाँको पठनपाठन अवरुद्ध भएको विषयमा शिक्षा मन्त्रालय पनि जानकार थियो। दुवै मन्त्रालयमा औपचारिक र अनौपचारिक ढंगले मणिपाल प्रशासन र आन्दोलनरत पक्षले उजुरी पुर्याएकै थिए। तर वास्ता गरिएन। स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै मन्त्रालयले बेलैमा ध्यान नदिँदा यो दुर्घटना निम्तिएको हो। अहिले आएर छानबिन गर्ने र लाइसेन्स खारेजीसम्मको सुझाव दिने र लिनेहरूले पहिले यस्तै एक्सन लिन किन सकेनन्?
कांग्रेस–माओवादीको निशाना न्यायालय, प्रहार आफ्नै घाँटीमा
जीवन क्षत्री -
लोकतन्त्रमा संस्था र धरोहरहरु बनाउन गाह्रो हुन्छ, तिनको विनाश गर्न सजिलो हुन्छ भनेर नागरिकका रुपमा हामीले अहिले बुझ्नु अपरिहार्य छ। संस्था ध्वस्त पारेर व्यक्ति हावी हुने परिपाटी संस्थागत हुँदै गए अमेरिकाको जस्तो समुन्नत लोकतन्त्र त लड्खडाउँदो रहेछ भने हाम्रोजस्तो कमजोर र शिशु लोकतन्त्रमा न्यायालयजस्ता संस्थाहरुमाथि अहिलेको जस्तो आक्रमण कायम रहे हाम्रो समाज र निरपेक्ष अराजकताबीच कुनै पर्खाल बच्ने छैन।
देउवाको राजनीतिक कलंकको गजुर
यो महाअभियोग प्रस्तावले सबैभन्दा ठूलो ‘ड्यामेज’ नेपाली कांग्रेस पार्टी र त्यसका सभापति देउवालाई गर्नेछ। तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको नाममा कलंकको खातको त्यसै पनि कमी छैन। यो कलंक भने देउवाले अहिलेसम्म कमाएका कलंकहरुमा गजुर बनेर बस्नेछ।
पिताम्बर शर्मा -
यी कुराहरूले बौद्धिक परम्परालाई अगाडि बढाउन सक्ने जमात बढेको छ भन्ने देखाउँछ। तर, यो परम्परालाई कहिँ-कतैबाट पनि संस्थागत संरक्षण, भरथेग छैन। राज्य बेखबर छ। राज्यका नीति अध्ययन-अनुसन्धानभन्दा पनि हचुवा र सनकका भरमा निर्देशित भइरहेका छन्। बेच्ने सामानको उपादेयता र गुणवत्ताप्रति उदासिन पसलेजस्तै विश्वविद्यालयको पसल खुल्छ मात्रै।
डा. भीष्मकुमार भूसाल, उपसचिव -
कर्मचारी साथीहरु! हाम्रै केही साथीहरूले पनि भूकम्पमा ज्यान गुमाए। आजीवन देश सेवामा निःस्वार्थ खट्छु भने पनि ती फर्केर आउन सक्दैनन्। हामी भाग्यमानी हौं, ज्यूँदै छौ। तर हामीले ज्यूँदो रहेको प्रमाण आगामी पुस्तालाई दिन बाँकी छ। राजनीतिलाई गाली नगरौं। ती सिक्दैछन्।
बादलले छेकेको उज्यालो केहीबेर जोडले बतास लागेमा खुलिहाल्छ। हाम्रा जुम्स्याई र लालफित्ताबाट माथि उठेर नयाँ मानक स्थापित गरौं। अबको ४ वर्षमा पुनर्निर्माणको सफल अवतरण गरेर हामीले आफूलाई प्रमाणित गरौं। फेरि आउने विपदमा एउटा सरकारी कर्मचारी पीडितको छेउ पुग्दा तिनले भनून्-विपद्को बेला सरकार आयो। सरकार मेरै हो। कसलाई थाहा छ, अर्को ५६ सेकेन्ड दोहोरिए हामी रहौंला नरहौंला।
बजारको छाँयामा हाम्रा बौद्धिक
सिके लाल -
जसरी बहुमत सधैं सही हुँदैन भनेपछि सुकरातलाई विष पिउन बाध्य गरियो, अहिले त्यस्तो अवस्था आएको छ। लोकतन्त्र भनेको त बहुमत हो नि, त्यसमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ? नेपाली राष्ट्रियता भनेको त लवेदा-सुरुवाल, नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म हो नि, त्यसमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ? भनिन्छ। यस्तो प्रश्न उठाउने व्यक्ति त सिधै देशद्रोही हुन्छ। अहिले यस्तो परिवेश बनेको छ।
काठमाडौंको पौराणिक संस्कृति देखेर संसार चित खान्छ
जापानको राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलले संसारकै चारवटा प्राचीन सहरको सूचीमा काठमाडौंलाई पनि छान्यो। यसले हाम्रो यो सहर संस्कृतिमा कति धनी छ भन्ने देखाउँछ। संसारका धेरै ठाउँमा लोप भइसकेका पौराणिक सभ्यताका अंश हाम्रो काठमाडौंमा जीवित छ।
जगदीश घिमिरे -
कमल पी. मल्लका अनुसार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र बालकृष्ण सम नेपाली साहित्यकारहरू हुन् अर्थात् बौद्धिक होइनन्। म दाबा गर्छु- यिनीहरू यसमा समाजमा बौद्धिक कहलाउन योग्य मानिदैनन् भने नेपालमा कोही पनि बौद्धिक छैन। मलाई लाग्छ यिनीहरू नेपाली समाजका मात्र होइन, विश्व बौद्धिक समुदायका सदस्य हुन्। बौद्धिक हुन पीएच.डी. गर्नु पर्दैन। सबभन्दा ठूलो नेपाली बौद्धिक को भनेर सोधे म अलिकति पनि नहिच्किचाईकन भन्छु- गौतम बुद्ध, जससँग कुनै पनि प्रमाणपत्र थिएन।
नेपाली बुद्धिवादीः एउटा उपाख्यान
हर्क गुरुङ 'लेखाली' -
आजको नेपालको अवस्थामा जहाँ बुद्धिजीवीहरूलाई जनसाधारणबाट विरलै आर्थिक टेवा र प्रोत्साहन मिल्छ, त्यहाँ आर्थिक सुरक्षाको स्रोत कर्मचारीतन्त्रको आश्रयतिर बुद्धिजीवीहरू झुम्मिनु कुनै अचम्मको कुरो होइन । फेरि, बुद्धिवादी क्षमता र कार्यको सबभन्दा ठूलो उपभोक्ता सरकार हुनुका साथै आधुनिक शिक्षित समुदायको मुख्य निर्माता पनि उही सरकार नै हो र उखान छ, 'जसले मह काढ्छ उसले हात चाट्छ ।'
एमाले घोषणापत्रका पाँच मुद्दा
रविन्द्र अधिकारी -
अबको स्थानीय सरकार भनेको सेवा प्रदान गर्ने मात्र होइन, आफ्नो विकास आफैं गर्ने, आफ्नो समृद्धि आफैं हासिल गर्ने र त्यो समृद्धि हासिल गर्न प्रदेश र केन्द्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने हो। हाम्रो पार्टीले यी तीनैवटा निर्वाचनका दृष्टिबाट स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गर्न खोजेको छ।